Umthetho: ukubuyiselwa kweentlobano zesono kuyingozi kwaye akukho mthethweni Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho Phindela iphosi
I-phenomenon entsha, ebonakalayo ngokukhawuleza enxulumene nokuthunyelwa kwe-imeyile "kukuziphindisela." Kuyinto yokuhanjiswa kwe-intanethi yezithombe ezingenanto kunye nezingenanto ezingenanto ngaphandle kwemvume kumzame wokuhlazisa kunye nokulimaza iithagethi, ikakhulukazi kubafazi. Abantu baye bafumana kunzima ukuba nemifanekiso isuswe kwi-intanethi. Iziza ezininzi apho imifanekiso ibanjwe ngaphandle kwe-UK, kwaye izicelo zokususa umxholo zidlalwa ingqalelo.
Ngo-Ephreli 2017, umthetho omtsha wokuziphindaphinda i-porn eScotland waqala ukusebenza phantsi Ukuziphatha kakubi nokuziphatha kakubi ngokwesondo 2016. Isigwebo esiphezulu sokubhengeza okanye ukusongela ukwazisa isithunzi esinobuhlobo okanye ividiyo i-5 iminyaka entolongweni. Ulwaphulo luquka imifanekiso ethathwe ngasese apho umntu wayenobude okanye engaphantsi kweengubo okanye ebonisa umntu owenza isenzo sesondo.
Ukubuyiselwa kweentlobano zesinxeba kukwaphulo-mthetho ku-England naseWales. U-Israyeli belizwe lokuqala kwihlabathi ukuba lenze ngokungekho mthethweni kwaye liphathwe njengoluphulo-mthetho ngokwesondo. Isohlwayo, xa sinetyala, ifikelela kwi-5 iminyaka entolongweni. IBrazil iphinde ifake ibhajethi ukuba yenze ngokungekho mthethweni. EUnited States, iNew Jersey neCalifornia zikhokelela ekupheleni kokufanayo. KwiCanada, intombazana eneminyaka eyi-17 yayinecala lokufumana iifoto zoonografi emva kokuba isasaze iifoto ze-girlfriend zangaphambili.
Izibonelelo zokuncedisa ziquka Ukuphindezela ukuxhaswa koonobumba kwaye Uncedo lwabafazi baseScotland.
<< Ngubani lo uthumela imiyalezo ngefowuni? Ukunyuka koLwaphulo-mthetho >>